Yintoni entsha kwi-Photoshop: tshintsha isibhakabhaka ngonqakrazo olunye | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kungekudala uza kuba nakho ukubuyisela isibhakabhaka somfanekiso kwi-Photoshop ngonqakrazo olunye
I-Adobe iye ngaphambili ukubhengeza ukuba kungekudala siza kuba nakho kuyilo lwethu lomculo esiyithandayo olubizwa ngokuba I-Photoshop khetha kwaye ubeke endaweni yezulu lomfanekiso phantse njengomlingo.
Yiyo i enkosi kuAdobe Sensei, ubukrelekrele bobugcisa bukaAdobeSiza kuba nakho ukwenza ukuchuma njengokukhetha isibhakabhaka esipheleleyo kwaye sikwazi ukusenza mnyama, senze ubusuku, ukubeka inyanga epheleleyo okanye nantoni na ethi qatha engqondweni; kwikhamera yeFotohop kwaye kwii-mobiles zethu zivumela ezo zinto zomlingo.
UMeredith Stotzner, Umphathi weMveliso yeAdobe, ikwanguye oboniswe kwividiyo amandla okukhetha nokufaka isibhakabhaka endaweni yokongeza isibhakabhaka esimangalisayo ngokutshona kwelanga okanye esinokuthi siwulungele kakuhle lo mboniso. Njengomzekelo wale vidiyo ka-Adobe ukuze ungalahli iinkcukacha zento entsha ye-Photoshop:
Njengoko ubona, Iindidi zezulu kufuneka sikhethe kuzo kwaye bakwindawo entle abayikhethileyo, basinika inani elikhulu lamathuba okunika loo mifanekiso into engeyonyani, kodwa kwiifoto zomtshato, imibhiyozo nayo nayiphi na into esifuna ukuyisebenzisa kwiiwebhusayithi zethu, sisixhobo esikhulu.
Sele siyibonile into efanayo kwiKhamera yePS, IApple yeApple ye-Android kunye ne-iOS, kwaye oko kusivumela ukuba sikhethe kwezinye izihluzi ukutshintsha isibhakabhaka, nangona sikhawulelwe kwisihluzo ngokwaso. Apha sinenkululeko yokuzikhethela ezahlukeneyo ukukhetha ubusuku, imini, ukutshona kwelanga, okanye nantoni na esiyithandayo.
Ngoku Kuya kufuneka silinde uhlaziyo ukuba lukhutshwe kwaye masihle siye kwishishini ukuya kuvavanya kwezo zibhakabhaka esinokuthi ngazo sihlangule ezinye zeefoto ebesizithathile ngaphambili kwaye, ngezo zibhakabhaka zivulekileyo, singazenza zibe ngumlingo obonakalayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Kungekudala uza kuba nakho ukubuyisela isibhakabhaka somfanekiso kwi-Photoshop ngonqakrazo olunye
Kwaye siba ngumlandeli weseti entsha yeLEGO: Baby Yoda
I-Studio Ghibli ibeka kwimifanekiso engama-400 yeefilimu zazo ezingama-8